SANJAY GURUNG: गिरिजा आफ्नै कहा
काठमाडौ, फाल्गुन २८ -
उनी जहाँ बस्थे, त्यो एउटा डेरा मात्रै थिएन । महाराजगन्जको त्यो डेरा कोइराला निवासै भइसकेको थियो । त्यही सोचेर होला, करिब दुई वर्षको बसाइपछि शुक्रबार मण्डिखाटार सर्ने बेला कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पाइला एकैछिन अडिए ।
जुत्ता लाएर गाडीतिर अघि बढिसकेका पाइला पुनः भित्र फर्किए । 'त्यसपछि अलि लामो समय बाथरुम बसे, त्यहाँबाट निस्कँदा उहाँका आँखा रसाइरहेका थिए । उहाँको अप्ठ्यारो महसुसले हामीलाई नमज्जा बनाइरह्यो,' कोइरालाका एक सहयोगीले कान्तिपुरलाई भने, 'उहाँले साँच्चै महाराजगन्ज छाड्दा नरमाइलो अनुभव गनर्ुभयो ।'
महाराजगन्जबाट बसाइ सर्न निस्कनुअघि कोइरालाले कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालासँग एकान्तमा केहीछिन कुराकानी गरे । निवासमा नेताहरूको पातलो उपस्थिति मात्रै थियो । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट, केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत, शेखर कोइराला, कृष्ण सिटौला र केही सभासद् थिए । नेताहरूको उपस्थितिभन्दा पत्रकारहरूको भीड बढी थियो ।
चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि सहयोगीको आड लागेर कोइराला भर्‍याङ आफैं ओर्ले । श्वासप्रश्वास बढेपछि भुइँतलामा करिब सात मिनेट आराम गरेर पौने दस बजे निवासबाट निस्केका थिए उनी । कोइरलासँगै चिकित्सक जगदीश अग्रवाल थिए । पत्रकारकारको भीडलाई कोइरालाले गेटबाहिर गाडीबाटै हात हल्लाए ।
झन्डै ६ दशक प्रजातन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा होमिएका कोइराला ०४६ को परिवर्तनपछि राजनीतिको केन्द्र भागमा रहे तर उनले आफ्नै नाममा काठमाडौंमा घर किनेनन् । ०४२ देखि उनी भतिजा सशांकको घरमा तीन कोठा लिएर बसेका थिए । कार्यकर्तासँगको भेटघाट र कुराकानीका लागि महाराजगन्जमै उनले सम्पर्क कार्यालय लिएका थिए ।
पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको बसाइ बालुवाटार सर्‍यो । त्यसपछि पटकपटक प्रधानमन्त्री भएर झन्डै आधा समय बालुवाटार बसे पनि त्यहाँबाट निस्कँदा उनी सशांकको घरमै बसे । पछिल्लोपटक गत अघिल्लो असारमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि भने महाराजगन्ज डेरा लिएर बसेका हुन् । स्वास्थ्यस्थिति बिग्रेकाले तलमाथि गर्न समस्या भएको जनाउँदै उनलाई सुविधायुक्त घर लिइएको हो । त्यही भवन सुविधा नभएको भन्दै शुक्रबारदेखि उनी सुजाता निवास मण्डिखाटार पुगेका छन् । स्रोतका अनुसार जीवनको उत्तरार्द्धमा कोइरालाको छोरीसँगै बस्ने चाहना भए पनि यति चाँडै सर्ने कार्यक्रम भने थिएन । विदेशबाट बिहीबार फर्केलगत्तै सुजाताले सार्ने निर्णय लिएकी थिइन् ।
किन सरे कोइराला डेरा ?
सुजाता निवासमा बिरामी सभापतिलाई पुर्‍याएर र्फकंदा कार्यवाहक सभापति सुशीलले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सभापतिको बसाइसराइ सुविधाबाहेक अन्य कारण नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 'महाराजगन्जमा भर्‍याङबाट तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था भएन,' उनले भने, 'यहाँ -मण्डिखाटार) भुइँतलामा बस्नुहुन्छ । धेरै सुविधा छ ।' मण्डिखाटार सुजाता निवासको दक्षिणतर्फका एकतलाको ब्लकमा कोइरालालाई राखिएको छ । जहाँ सबै सुविधा सम्पन्न छ । स्रोतका अनुसार कोइरालाको बसाइसराइ असुविधा र हेरचाह अभावका कारण मात्रै होइन ।
कोइरालाको सहयोग र सेवामा रातदिन खटिएका राजेन्द्र पराजुली, शेखर थापा, गोकर्ण पौडेल र प्रहरी निरीक्षक मरासिनीले आफ्नो ऊर्जाशील जीवन बिताएका छन् । उनीहरूले कोइरालालाई कुनै अभाव हुन दिएनन् । सुरक्षाकर्मी भएर पनि मरासिनी कोइरालाका विश्वासिला सहयोगी भएका छन् ।
कांग्रेसका एक नेताको भनाइमा कोइराालको बसाइसराइ पारिवारिक र राजनीतिक दुवै रूपमा जोडिएको छ । 'जीवनको अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि आफ्नो सन्तान खोज्दै जानु स्वाभाविक हो,' कांग्रेसका एक नेताले भने, 'तर यतिमा मात्रै सीमित भने पक्कै होइन । यसको दूरगामी राजनीतिक अर्थसमेत लुकेको छ ।'
उनले व्यक्त गर्न नचाहेको राजनीतिक अर्थ सुजातालाई नेतृत्वमा स्थापित गराउने कोइराला चाहना हो । जुन कोइरालाले पार्टीको संस्थागत भावनाविपरीत सरकारको नेतृत्वमा पठाउनु र पछि उपप्रधानमन्त्री बनाउने एकल निर्णय गरेबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । उनले भने, 'गिरिजाबाबु' को स्वास्थ्य अत्यन्त खराब भएकै बेला सुजाताले 'टेक केयर' भएन भन्दै हतारमा डेरा सानर्ुमा पनि बढी कारण यहीँ लुकेको छ ।'
पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूमा सुजाताप्रतिको सम्बन्ध नकारात्मक छ जसलाई सामान्यीकरण गराउँदै छोरीलाई नेतृत्वमा स्थापित गराउने चाहना उनमा पलाएको देखिन्छ । महाराजगन्ज स्रोतले भन्यो, 'अब चाहेर पनि नचाहेर पनि सुशील, शेरबहादुर र रामचन्द्र पौडेलहरू सुजाता निवासमा जानुपर्ने भयो, निरन्तर भेटघाटले सुजाताप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुने अपेक्षासमेत हुन सक्छ ।'
महाराजगन्ज र भतिजा सशांकको घरमा बस्दा बिहान ६ बजेदेखि नै कोइरालाले नेता र कार्यकर्ता भेट्थे । कोइरालालाई भेट गर्नका लागि मात्रै नभएर समसामयिक राजनीतिक मुद्दामा आपसमा भलाकुसारीका लागि पनि नेताहरू कोइराला निवास बिहानै धाउँथे । मण्डिखाटार सरेपछि पनि त्यस्तै परम्परा कायम रहला त ? कोइराला निकट सिटौला भन्छन्, 'हो, कोइराला निवासमा यो परम्परा थियो तर छोरीकहाँ जाँदैमा नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन ।'
सिटौलाको स्यमं सुजातासँग राम्रो सम्बन्ध छैन तर उनी भने गिरिजाबाबु अन्तिम अवस्थामा आइसकेकाले आफ्नो भेट निरन्तर हुने बताए । 'कोइराला जहाँ बसे पनि मेरो भेट निरन्तर हुन्छ, यो अवस्थामा झनै साथ दिनुपर्छ,' उनले भने, 'अन्य पार्टीका साथीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न नपर्ने हो ।' कोइरालाले सनर्ु अघिल्लो दिन सिटौलालाई 'कोठा भुइँतालमा भएको, हरियाली रहेकाले पनि 'प|mेस' हुन्छ कि भनेर सर्न लागेको' भनेर जानकारी गराएका थिए । बिरामी भएर थला परे पनि राजनीति अपडेटबाट भने उनी टाढा छैनन् ।
सहयोगी राजेन्द्र पराजुलीका अनुसार शुक्रबार मण्डिखाटार सरेपछि पनि कोइरालाले काठमाडौं पोस्टमा छापिएको संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव बि लिन पास्कोले धारणा पढेर सुनाउन लगाएका थिए । बिहीबार अलि कमजोर भएकाले सक्नुभएन । 'तर आजसम्म उहाँलाई साप्ताहिकदेखि सबै पत्रिका पढेर सुनाउनुपर्छ,' पराजुलीले भने, 'आफ्नैबारेमा आएका नकारात्मक टिप्पणी र समाचार सुनेर कहिलेकाहीं मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ । कहिलेकाहीं कुरा बुभmदैनन् भन्ने प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ।'
posted by Sanjay Gurung at 7:12 AM